IMIBALA YEGRANITE YEECOMPUTER (IMIFANEKISO YEENDIDI EZIDUMILEYO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imibala yeGranite yeeComputer (Imifanekiso yeeNdidi eziDumileyo)
Imibala yeGranite yeeComputer (Imifanekiso yeeNdidi eziDumileyo)
Ubuhle bemibala yegranite, ukuhlala kwayo kunye nokusebenza ngokungafaniyo kwenza eli litye lendalo libe sesinye sezona zinto zifunwayo ezisetyenzisiweyo kuyilo lwangaphakathi. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezisetyenziswayo kwiitafile zekhitshi. Nangona kunjalo, igranite yeyona ihlala ithandwa kakhulu kulwakhiwo olutsha lwamakhaya kunye neeprojekthi zokulungisa iikhitshi. Imiphezulu yeetafile zeGranite zihle, zomelele, kwaye kulula ukuzicoca nokuzigcina. Zifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala enokusetyenziselwa ukuxhasa nasiphi na isitayile sekhitshi lekhitshi.
Ukwaphuka ngokupheleleyo kwe imiphezulu yeetafile lenyengane kwaye iindleko zabo zijonga isikhokelo sethu sokugqibela. Ngokubanzi iindleko zee-countertops ze-granite zingasukela kwi-50 ukuya kwi-100 yeenyawo ngonyawo wesikwere ngokuxhomekeka ikakhulu kuhlobo olukhethileyo, kunye nomhlaba wakho wokubala. Ezinye izinto eziqwalaselwayo kukuba utyebile kangakanani ufuna ukuba i-slab slab yakho ibe yiyo, ukujikeleza kwayo kunye neenkcukacha zepolishi. Ngokusekwe kulwazi oluqokelelwe kubanini bamakhaya, iindleko zizonke zokufakwa kwegranite entsha zihlala ukusuka kwi- $ 2000 ukuya kwi- $ 3200. Ukuthengwa kweetafile zegranite zihlala zibandakanya ubumbeko kunye nofakelo.
Abathengisi abaninzi bamatye endalo babhekisa kumanqanaba eetafile zegranite ezahlukeneyo. Bangakwazi ukusuka kumanqanaba 1 ukuya kumanqanaba 3 kwaye babonise ngokusisiseko ukuba ifumaneke ngokulula okanye ininzi into ethile enokufunyanwa. Amanqanaba eetafile e-Granite I kunye no-II afikeleleka ngakumbi kuneNqanaba III. Amanqanaba e-3 eetafile zegranite zinqabile kwaye ngenxa yoko kubiza kakhulu ukuthenga.
Abo bathengi ngamaxabiso abathengi begranite, njengabo banee-condos kunye namagumbi bahlala begcina imali ngokuthenga i-granite esele ikhethiwe. Olu hlobo luhlala luveliswa ngobuninzi kumazwe afana ne China okanye i-India. Ilitye elityunjiweyo liza ngobubanzi obuqhelekileyo kwaye linohlobo olunye lokukhetha. I-granite yeslab yesiko kwelinye icala ibonelela ngemiqolo embalwa, inikezela ngobubanzi obahlukeneyo, kwaye inokwakheka ngqo kwiinkcukacha zakho.
Imifanekiso yeGranite Colors
I-Granite eneToni yeJewel
Ukukhetha umda kwi-countertop yakho ye-granite yisigqibo esibalulekileyo ekufuneka senziwe ngaphambi kokuba ilitye lenziwe kwaye lifakwe ekhitshini lakho. Izitayile zomphetho ezithandwayo zilungile, i-bullnose, i-1/2 wotho kunye ne-3/4 bevel. Umda othe ngqo ukwabizwa ngokuba ngumda wokukhululeka okanye umda othe tyaba kwaye uthathelwa ingqalelo njengokhetho olukhululekileyo. Izitayile eziphuculweyo zomphetho zihlala zifuna ixesha elininzi lokuzipolisha kwaye ke zibiza kakhulu. Ezinye iindlela zokuphucula zii-ogee, i-ogee enzulu, i-knife edge, i-bevel egqithisileyo, i-bevel eguqulweyo eguqulweyo, kunye ne-bullnose epheleleyo.
Ukukhetha imibala yegranite ekhitshini kunqabile ukuba kube lula ukukhetha. Imifanekiso ayimeli ngqo imibala yokwenene kunye nobuhle oya kubufumana xa ujonga igranite ngobuqu. Apha ngezantsi kukho ezinye iintlobo ezithandwayo zemibala yemilenze yokuphamba. Ngeentlobo ngeentlobo zegranite ezikhoyo uqinisekile ukufumana umbala olungileyo wekhitshi lakho ngokusekwe kwisitayile salo, ubungakanani kunye nemibala yekhabhinethi.
I-granite emhlophe ayisiyonto imhlophe ngokungacacanga njengoko umntu ebenokucinga. Ngokwenyani ilayishwe yimithambo kunye nemithambo yemibala eyahlukeneyo kuxhomekeke kwisitayile osikhethayo. Igranite emhlophe lukhetho olukhulu kwizithuba ezincinci zekhitshi kuba inokwenza indawo ibonakale inkulu, kwaye ikhaphukhaphu. Ukongeza ii-counter ezimhlophe kakuhle kunye neekhabhathi zekhitshi ezimnyama ngokwahluka okuhle. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone ifayile ye- imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe igalari yemifanekiso.
Igranite emhlophe yaseBheteli isuka kwidolophana encinci yaseBermel Vermont. Igranite emhlophe yaseBheteli inombala oqaqambileyo, nkqu nengqolowa kunye nombala omsulwa owenza ukuba kufunwe kakhulu iiprojekthi zokwakha.
Umkhenkce waseVenice luhlobo lwegranite egrunjwe eBrazil. Iphawulwa ngombala wayo wegolide kunye neeminerali ezimhlophe kunye ezimdaka kunye nemibala exutywe kunye nenqwaba emnyama okanye emnyama emnyama. IVice yaseVenice lixabiso eliphakathi eliphakathi kwixabiso lenyengane enobulumko enemibala emihle yegolide esoloko isetyenziswa emakhitshini nakwiziqithi, kwaye inokuncedisa nokuba nekhabhathi emhlophe okanye emnyama.
I-Kashmir igranite emhlophe inezinto ezincinane ezimnyama kunye nemibala yekrimu kuyo yonke indawo. Kuyaziwa ngokuba yimbonakalo entle, nangona kunjalo kuyaziwa ngokuba lilitye elinomhlwa ngakumbi. Ngesi sizathu kuyacetyiswa ukuba umphezulu utywinwe ukunqanda ukudyobha kwaye uphinde utywine umphezulu rhoqo kwiinyanga ezintandathu.
I-Classic White Granite ingahluka ngokuxhomekeke kwididi yelitye. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zegranite emhlophe kunye neeyadi ezithile ezibiza ngokuba yiquartzite. Xa zisetyenziswa emakhitshini ezi zokubala zilula kwaye ziyaqaqamba kwaye ngenxa yazo ubukhulu becala ukubonakala okumhlophe kunokunceda ukwenza indawo encinci ibonakale inkulu.
Kwabanini bamakhaya abaninzi i-beige granite lukhetho olungenasiphelo olunika ubuninzi bokuhombisa ubhetyebhetye kuba iyahambelana kakuhle nokudityaniswa kwemibala emininzi. I-greyite ye-Beige inokudibaniswa nekhabhathi yokhuni okanye zombini iikhabhathi zombala okhanyayo kunye nomnyama. Imiphezulu yeetafile ze-Beige ze-granite nazo ziyaguquguquka xa kuziwa ekusebenzeni kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zekhitshi, ezinje ngesiko, ilizwe kunye nexesha langoku. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone ifayile ye- imiphezulu yeetafile zakhiwe ngexabiso lenyengane igalari yemifanekiso.
ISanta Cecelia inyengane ingeniswa ivela eBrazil kwaye ibonakaliswa ngegolide yayo efudumeleyo kunye nombala omdaka ngemithambo emnyama engwevu. Eli litye lendalo lithathwa njengegranite yokwahluka okuphakathi kunye nemvelaphi ye-beige.
IGiallo Ornamental Gold Granite lilitye laseBrazil elibizwa ngamanye amaxesha iGiallo Santo, Amarello Ornamental, okanye iJuparana Gold. Ngelixa unombala omhlophe ukuya kumbala we-beige ugxininiswe kakhulu ngombala omdaka, omnyama nangwevu. Olu hlobo lunokwahluka okuphakathi ukusuka kwiizilebhu ezahlukeneyo.
IMillenium Gold Granite ekwabizwa ngokuba yiMillenium Cream ingeniswa eIndiya kwaye lilitye elikhanyayo ngombala ngegolide kunye nemithambo engwevu. Inokwahluka okuphakathi kwi-slab ukuya kwi-slab kwaye iyaziwa ukuba ihlala ixesha elide, isezantsi kwaye iza nokugqitywa kwe-polish.
I-Giallo Renoir granite ihlala ingeniswa ivela eBrazil kwaye inombala otyebileyo wegolide kunye nokukhanya okuthe tyaba okukhanyayo kunye nomdaka ngombala. Kuxhomekeke kwisilayidi osikhethileyo sinokwahluka ukusuka kumbala otyheli ngokukhanyayo ukuya kwigolide ngombala.
Fireworks Granite Slabs zivela eBrazil kwaye zinemvelaphi entle emthubi emhlophe, igolide, ingwevu kunye nokumnyama. Eli litye lilungele imiphezulu yeetafile ekhitshini okanye ukutyibilika kwaye uqinisekile ukuba uza kwenza umbono omkhulu kwiiprojekthi zakho zokulungisa kwakhona ikhaya. Bona Okuninzi Iindidi zomgangatho Apha.
Igolide neSilivere Granite Slabs zihlala zivela eBrazil kwaye zibonisa ubukhulu becala imvelaphi yegolide emhlophe kunye nengwevu efakwe mnyama. Olu hlobo lilitye elinomtsalane lohlahlo-lwabiwo mali oluhlala lusetyenziswa kwizinto ezingenaxabiso zokuhlambela kunye neekhitshi.
I-Sunrise Yellow Granite Slab ifakwe eIndiya enemvelaphi ephakathi ye-beige enemibala emnyama, emhlophe nepinki. Yenza udibaniso olukhulu ukunceda ukukhanyisa indawo ekhitshini.
Ubuhle bemibala yemiphezulu yeetafile yegranite, ziintlobo ngeentlobo zokukhetha, kunye nokuhlala ixesha elide. Ezi zizathu zibini zenza ukhetho olufanelekileyo kuninzi loyilo lwekhitshi. Ukongeza i-granite ayiphumanga kwisitayile kwaye iyaqhubeka nokufunwa kakhulu ukuba isetyenziswe kwiiprojekthi zokulungisa amakhaya amatsha. Ngasentla ngumzekelo wecwecwe lekhitshi elimnyama lekhitshi.
Ukwenza isitatimenti esimangalisayo abaninimzi abaninzi bakhetha ukusebenzisa izixhobo zokubala ezimnyama okanye ezingwevu. Umbala omnyama wegranite ’ukukhanya okuncomekayo kweenkuni kunye nekhabhathi emhlophe yeyona ilungileyo kwaye ihlala isetyenziswa kuyilo lwasekhitshini lwesiqhelo nangoku. Iprojekti enkulu malunga nezinto zokubala ze-granite ezimnyama zihlala zithande ukuba nzima, kwaye kunqabile ukuba zifumane amabala enza ukuba kube lula ukuzigcina. Bona i imiphezulu yeetafile lenyengane emnyama igalari apha.
I-Granite emnyama ye-Bengal ihanjiswe ngwevu, luhlaza kunye nomhlophe. Imayini eMzantsi India le granite ayisiyontunja, inzima, kwaye iyaziwa ngomhlaba ophucukileyo kunye nokuqina kwayo.
Kukho iiyantlukwano ezahlukeneyo zeVolcano Black Granite kuxhomekeka kwindawo evela kuyo. Kumfanekiso ongentla kubonisiwe iVolcano Black Granite evela eBrazil. Umahluko waseBrazil uyaphawuleka ngenxa yokuthanjiswa kwawo okude, ngelixa iityhubhu ezingeniswe eIndiya zinendlela eyahlukileyo yokuhombisa.
I-Black Galaxy ePolish Granite inikezela ngokubukeka, okwangoku ukujonga iikhabhathi zakho zasekhitshini. It has a sheen high polished with shimmering golden flakes kulo lonke kwaye umahluko phakathi phakathi kwamatye. Ingeniswa ngaphakathi isuka e-India kwaye lukhetho oludumileyo lweeprojekthi zokwakha iindleko eziphantsi.
UBrown yenye yezona zinto zikhethwa kakhulu ngombala wegranite ngenxa yemvakalelo efudumeleyo ebonelelweyo. Igranite ebrown ihlala isetyenziselwa ukwenza uyilo lwasekhitshini / lwelikhitshi lwelizwe kwaye ihambelana ngokugqibeleleyo kunye neekhabethe zekhabhathi ezahlukeneyo zokwenza umoya omemileyo. Nangona kunjalo, uninzi lwabayili bezinto zangaphakathi zivakalelwa kukuba ii-browns zihambelana ngokugqwesileyo kunye nekhabhathi yombala wokukhanya ekhitshini ye-rustic.
Amehlo entlango ngumbala wegranite omdaka ngombala ovela eSaudi Arabia. Amehlo entlango aphakathi kunye neeflakes ezimnyama kunye nemvelaphi emnyama ye beige. Ukusuka kwisileyi ukuya kwisileb kukho umahluko omkhulu wemibala kunye nomthamo.
IBrown Sao Paulo Granite isuka eBrazil kwaye ine-granulation ephakathi. Iyafana neGolden Caju, kunye neDourado Caju ezizezinye ezibini ezembiwa kwindawo ngokubanzi ye-smae.
IGiallo Boreal yigranite emdaka egrunjwe eBrazil enemvelaphi emnyama emnyama kunye nemibala eqaqambileyo enamachaphaza amnyama kuyo yonke indawo. Ikwafana neAmarillo Boreal Granite, kunye neAmarillo Gold.
I-Granel-Toned Granite -Lo mbala utyebileyo weethoni lenyengane ibizwa ngokuba ziitoni zeJewel kuba ziyafana namatye anqabileyo axabisekileyo okanye anqabileyo. Bahlala benembonakalo eyoyikekayo yenqanaba eliphezulu lokugcwalisa imibala. Imibala ethandwayo yeetoni zejel zibandakanya i-ruby ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka, isafire eluhlaza okwesibhakabhaka, itopazi emthubi, kunye nomthubi we-amethiste ukubala ezimbalwa.
I-Blue Granite-Izimbiwa ezi-Blue ezifakwe kwi-granite ziyinika ukubonakala okungaqhelekanga kunye nokungaqhelekanga. Iikhitshi eziyilelwe ngegranite eluhlaza okwesibhakabhaka zithandwa kakhulu kwaye zinokubangela incoko ngenxa yokubonakala kwazo kunye nokubhena komtsalane.
I-Blue Star Granite ifakwe e-China kwaye yaziwa ngombala ohlaza okwesibhakabhaka odityanisiweyo kunye namabala amhlophe kunye ne-beige enamabala amakhulu egrey kunye nomnyama omnyama odibene ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Flash Blue Granite iyimbiwa eIndiya kwaye yaziwa ngokuqhekeka kwayo kunye neempawu zoLwahlulo ezinomahluko ophantsi phakathi kwamatye. Iyasetyenziswa ngokubanzi kwiitafile zokubala, kunye nakwimigangatho kunye nodonga / i-backsplashes. Elinye igama lale thoni yiMontevedo.
I-Lavender Blue Granite ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-Orion Blue, okanye iOrissa Blue imbe eIndiya. Eli litye linokwahluka okwahlukeneyo kwaye ngenxa yokuqina kwalo lisetyenziswa kakhulu kwiitafile zokuthambisa, ukutyibilika, kunye nodonga.
Igranite ebomvu inikezela ukhetho olukhulu lwee-shades ukwenza ingxelo enesibindi kunye nokongeza amandla emandla kwindawo yakho yasekhitshini. Imiphezulu yeetafile zegranite ebomvu azithandwa njengezinye izinto kodwa ngokuqinisekileyo zenza ingxelo ebambisa amehlo. Zihlala zibhangqiwe kunye neekhabhathi ezinemibala ekhanyayo enombala opeyintiweyo wepalette ukwenza uyilo olumangalisayo lwekhitshi.
I-Bordeaux granite inombala ocacileyo obomvu oxutywe negrey, igolide, brown, kunye ne-beige veining. Kukhetho oludumileyo ngenxa yeetoni ezifudumeleyo kunye nokujonga ngenkalipho okuncoma ikhabhinethi yetsheri.
Iikhikhini eziyilelwe ngegranite eluhlaza zivusa imo yoxolo nokuzola. Akunjalo kuphela ezi ntlobo zee-countertops ezikhuthaza amehlo, zizisa ingqiqo yendalo kwindawo yakho yekhitshi. Ukudibana okuluhlaza ngokukuko kunye nemibala eyahlukeneyo yemibala yekhabhinethi kwaye kunganika indawo yakho yangaphakathi isiphelo esiphezulu sijongeka unqwenela. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone ifayile ye- imiphezulu yeetafile lenyengane eluhlaza igalari.
ICosta Esmerelda Granite ichazwa ngcono njengokudibanisa okuhle nakweyiphi na ikhitshi. Imibala yayo enzulu etyebileyo nenomdla iyenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo kubanini bamakhaya abacalulayo. Lilitye elihlala ixesha elide elingabonakalisi iminwe yeminwe kakuhle, kwaye alithambekele ekungcoleni. Olunye lweempawu ezizodwa zezi slabs ziimfissure ezihamba kuyo yonke indawo. Ezi fissure zinika ilitye ukuba likhetheke, nangona kunjalo ayinguye wonke umntu oya kukuxabisa oku kujongeka. Kunokubakho umahluko omkhulu phakathi kwamatye abhalwe ngamatye amnyama kunye nokukhanya okukhanyayo avela kwikwari enye.
I-Sea Foam Green Granite lilitye elingaqhelekanga elalifihliwe eBrazil kwaye lisetyenziselwa imiphezulu yeetafile, i-flooring kunye neendonga. Ilitye linikezela ngokwahluka phakathi phakathi kwamatye. Kuyaziwa njengelitye elinzima ukulufumana, okwam kunye nokuvelisa, yiyo loo nto iphakama ngexabiso eliphezulu.
IVerde Bamboo Granite ifunyenwe eBrazil kwaye inemibala emangazayo yemifuno, umbala omnyama, umbala omnyama kunye nokhrim. Ihlala isetyenziswa kwizicelo zangaphandle nangaphakathi.
Imibala emihle yegranite enje ngeGreen Pearl lenyengane eboniswe ngentla ikwabizwa ngokuba yitoni yegolide ngenkangeleko yabo exotic. I-jewel yethoni lenyengane inembonakalo enomtsalane edla ngokudityaniswa nekhabhathi yombala othululweyo ukugcina uyilo lungoyiki kakhulu. I-Green Pearl Granite yimbiwa ikakhulu e-India kwaye inexabiso eliphantsi lomahluko phakathi kwamaqhekeza e-slab. Eli litye lihambelana kakuhle neekhabhathi ezikhanyayo kunye nemibala yodonga.
Ndwendwela eyethu imiphezulu yeetafile lenyengane igalari yezimvo ezingakumbi zekhowudi yakho elandelayo yekhitshi okanye uyila kwakhona. Ukongeza imibala yegranite kuyilo lwakho lwekhitshi, jonga kwiphepha lethu lokwabelana ngokuthandwa Isoftware yoyilo lwangaphakathi ukuzama izimvo ezahlukeneyo.
Ungalichaza njani igama lakho lokugqibela
ubhala kanjani amakhadi enkosi emtshatweni
ukuseta itafile kulwamkelo lomtshato
Itemplate yomsitho womtshato wasimahla
gwen stefani kwaye blake shelton umtshato